Commodity(Commodity) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
शिवम् सिमेन्ट्सको नाफा ३९.९२%ले घट्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले ६५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ३९.९२ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नाफा...
साल्ट ट्रेडिङको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, कति छ बोनस सेयर ?
काठमाण्डौ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको गत आर्थिक वर्षको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज चैत १४ गते अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले भोलि चैत १५ गतेदेखि चैत ३० गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ।यसको मतलब आज चैत १४ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो कम्पनीको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य...
हिमालयन डिस्टिलरीको नाफा १२.७०%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १२.७० प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अवधिमा...
महँगियो नेपालीको भान्सा, एकमहिनामै प्याजको भाउ ५६%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । चाडपर्वका बेला नेपालीको भान्सा महँगिएको छ। भर्खरै दसैँ सकिएको र तिहार नजिकिँदै गर्दा नेपालीको भान्सा महँगिएको हो। एकातिहार चाडपर्वको खर्च र अर्कोतिर भान्सामा आवश्यक विभिन्न वस्तुको मूल्य महँगिदा जनता मारमा परेका छन्। पछिल्लो १ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालीको भान्सामा अत्याधिक प्रयोग हुने सुकेको प्याजको मूल्य...
शिवम सिमेन्ट्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेडले आफ्नो छैटौँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत असोज २२ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो कात्तिक १६ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको होटेल सोल्टीमा बिहान १० बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सञ्चालक समितिले प्रस्ताव...
नेपाली छुर्पी विश्व बजारमा पुर्याउँदै यी युवा, मासिक १ लाख केजीसम्म निर्यात
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । कोरोनाका कारण भएको निषेधाज्ञा र लकडाउनले गर्दा अहिले धेरैजसो व्यापार–व्यवसाय ठप्प छन्। कतिपय व्यवसाय बन्द पनि भए। कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन्। कोरोना कहरको बाबजुद सुदन चुदाली र उनका सहयात्रीले आफ्नो व्यापारबाट मनग्गे कमाइ रहेका छन्। सुदनले विगत ५ वर्षदेखि नेपाली छुर्पी विदेश निर्यात गर्ने...
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको भाउ, एलपी ग्यास पनि रु. २५ ले महँगियो
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। निगमले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धि गरेको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढाएको छ। अब पेट्रोल प्रतिलिटर १३० रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेल ११३ रुपैयाँ कायम भएको...
सर्वोत्तम सिमेन्टको विशेष साधारणसभा आज, लाभांश पारितसहित यस्ता छन् अन्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको आज (असार १० गते) विशेष साधारणसभा बस्दैछ। सभा काठमाण्डौको तीनकुनेस्थित न्यौपाने टावरमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक २०७७/७८ सम्मको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कुल कुल २०.१२४ प्रतिशतले हुन आउने लाभांश...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा शिवम सिमेन्ट लिमिटेडले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको यो नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २६.५२ प्रतिशतले बढेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा...
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य समायोजन गरेको छ। निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु. २ का दरले घटाइएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेशनले पठाएको पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिएको हो। निगमका...
अनलाइन सपिङ गर्दा अपनाउनुस् सावधानी, नत्र हुन सक्छ ठूलो नोक्सानी
काठमाण्डौ । प्रविधिको विकाससँगै विश्वमा अहिले अनलाइन ट्रेडिङ ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ । घरमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत एक क्लिकको भरमा आफूलाई चाहिएको स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका वस्तुहरु आफ्नै घरदैलोमा मगाउन सकिन्छ । हिजोआज मानिसलाई आवश्यक वस्तुहरु छिटो र सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने गतिलो माध्यम बनेको छ ‘अनलाइन सपिङ’ । नेपालमा...
हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटीद्वारा नगद लाभांश प्रस्ताव, वार्षिक साधारणसभा पुस २८ गते
काठमाण्डौ । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्तावसहित आफ्नो वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ । कम्पनीको आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करसहित सेयरधनीहरुलाई चुक्तापुँजी १२ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरको नगद...
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन गरेको छ । निगमका निर्देशक तथा प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रतिलिटर रु १ ले वृद्धि गरी मूल्य समायोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य...
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर रु. २ ले बढ्यो, एलपी ग्यासको मूल्य यथावत्
काठमाण्डौ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएपछि नेपाल आयल निगमले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर रु. २ वृद्धि गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दासमेत गत चार महिनायता मूल्य समायोजन नगरेको निगमले आइतबार वृद्धि गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । उनले...
'कस्मिक क्रिस्प' एक वर्षसम्म नकुहिने नयाँ प्रजातिको स्याउ, कति पर्छ प्रतिगोटा ?
काठमाण्डौ । दुई दशक लगाएर विकास गरिएको र एक वर्षसम्म फ्रिजमा राख्दा नबिग्रने नयाँ प्रजातिको स्याउको बिक्री आइतवारदेखि अमेरिकामा सुरु भएको छ। कस्मिक क्रिस्प नाम दिइएको स्याउको वाशिङ्टन स्टेट विश्वविद्यालयमा सन् १९९७ मा पहिलो पटक खेती गरिएको थियो। 'दह्रो, कुरकुरे र रसिलो स्याउ' प्रवर्द्धन गर्न एक करोड अमेरिकी डलर खर्च लागेको...